Vanhu vemuHarare Vomanikidzwa Kuenda kuMusangano weZanu-PF
Vechidiki vakawanda vanoti havasi kufara kuti bato reZanu PF riri kuvamanikidza kuti vanofora muHarare nemusi weChitatu vachiratidza rutsigiro kumutungamiri wenyika VaRobert Mugabe ivo vasina mabasa ekuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo.
Vamwe vatsigiri veZanu PF vanotiwo havasi kufara kuti vari kumaninikidzwa nebato ravo kuti vaende kunofora. Mumwe mutsigiri weZanu PF uyo angoda kudaidzwa nezita rekuti Chamunorwa ati anogara kuChitungwiza audza Studio 7 haasi kufara nekumanikidzwa kunofora.
VaElliot Munemo avo vanotengesera mamusika weMupedzanhamo vatiwo vechidiki veZanu PF vasvika pamusika pavo vakavati misika yose inofanirwa kuvharwa kuitira kuti munhu wese anotengesera pamusika uyu une zviuru nezviuru zvevanhu vanofanira
Amai Leorcadia Nhachi avo vanotengesera mumigwagwa yepakati pedhorobha reHarare vati vechidiki vanga vakapfeka mbatya dzine mifananidzo yemusoro waVaMugabe vakakunga chibhakera vakasvika pavanotengesera vachivazivisa nezvehurongwa hwekufora uhu.
Asi Amai Nhachi, avo vanove chirikadzi, vati havasi kuzoenda kunofora kunyange zvodii vachiti hazvipi mhuri yavo cheuviri.
Mumwe mugari wemuHarare, VaDenford Zindoga vati vechidiki vazhinji havana mabasa saka havawone zvakakodzera kuti vanoratidza rutsigiro kuna VaMugabe vave nemakore makumi matatu nematanhatu vari pabasa.
Vati chave kudikanwa ndechekuti hurumende igadzirise nyaya dzekuti vechidiki vawane mabasa kwete kuti vachidiki vaende vachinofora mudhorobha vachiti kufora uku kuedza kuvanzurunza kusawirirana kuri muZanu PF panyaya yekuti achatora matomhu kubva kuna VaMugabe kana vachinge vabva pachigaro ndiyani.
Asi VaMugabe pachavo vakati havasi kuzosiya chigaro kudzamara vatorwa naMwari. Vakatiwo veruzhinji vakaramba vachivavhotera havaone paine chingapa kuti vasiye basa.
Asivebato rinopikisa reMDC-T vanoti VaMugabe nebato ravo reZanu PF vanga vachibirira musarudzo dzose dzapfuura.
Zvichakadaro, munyori anowona nezvegwara remusangano kana kuti Policy and Research muboka revechidiki reMDC-T, VaCaston Matewu vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kuvandudza hupfumi hwenyika kuitira kuti vechidiki vakawanda vawane mabasa kwete kuswera vachiforera munhu akwegura saVaMugabe avo vave nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZanu PF, VaSimon Khaya Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iri kupomerwa bato ravo yekumanikidza vanhu kunoforera VaMugabe mangwana.
Asi munyori muboka revechidiki muZanu PF, VaKudzai Chipanga vaudza Studio 7 paurnhare kuti bato ravo harisi kumanikidza munhu kunofora vachiti bato ravo rine rutsigiro rwakakura kwazvo zvekuti hapana chikonzero cheku manikidza vanhu kunofora.
Zanu PF inoti iri kutarisira vanhu vanosvika miriyoni imwe chete kuti vafore muHarare vachiratidza rutsigiro kumutungamiri wenyika.